Shidaalka Ogaden Basin ee dhulka Soomaali Galbeed – Wargeyska Waxgarad
Home / Warbixinno / Shidaalka Ogaden Basin ee dhulka Soomaali Galbeed
Liibaan Faarax June 29, 2018	Warbixinno 47,464 Views
Khatartii ugu weynayd oo soo wajahday Soomaalida gumeysiga ku hoos nool
Wuxuu Barkinka idiin soo gudbin doontaa qoraallo taxane ah oo ku saabsan mawduuca shidaalka ee degaanka Soomaalida Itoobiya gumeysato.
Shirkadda Shiinaha ee Poly-GCL ayaa maanta (28 Juun 2018) bilaabaysay soosaarka gaaska ceelasha Elelle (Hilala). In kasta uu koobnaan doono, maadaama lagu dhaaminayo booyado ama haamaha gaaska si shirkadaha shamiintada iyo goobaha tamarta badan ku baxdo, haddana waa tallaabo naxdin weyn ku noqatay qof walba oo Soomaali ah oo damiir iyo dareen waddani ah leh. Dad yar oo waxgarad ah baa fahansan barnaamijka ra’iisul wasaaraha (RW) cusub ee Itoobiya loo soo xambaariyay. Faahfaahin intaa dheer sii geli meyno hadda wakhtigan xaadirka ah, laakiin waa in aynu niyadda ku heynaa qorshaha siyaasadeed ee socda uu yahay xeelad ka mid ah xeeladaha dagaal ee ka socdo Geeska Afrika. Qoraalkan 1aad ee ugu horeeya waxaan ugu talagaley in Soomaalida sawir muuqaal ah aan ka siiyo xaaladda taagan, si dareenkooda aragtida u helo xaqaa’iiq ay ka tusaala qaataan. Waxay rajadeydu tahay in arrintani Soomaalida ku abuurto lexjeclo, dabadeedna u midoobaan difaaca kheyraadkooda iyo ilaalinta mustaqbalka ummaddooda.
Siduu Bangiga Adduunka seddax sano ka hor yidhi, waxaa go’aan ah in muddada u dhexeysa 2020-2030 macdanta iyo shidaalka la qodo looga dhigo lafdhabarta dhaqaale ee Itoobiya, oo ugu yaraan lacagta adag ay ka helaan 10 jibbaaranto. Marka, la socda in dawladaha dillaaliinta ah sida Ingiriisla, ama kuwa qoditaanka macdanta caanka ku ah oo shirkadahooda suuq-raadiska yihiin sida Kanada iyo Ostraaliya, aya lacago ku bixiyaan daraasaad iwm si ay Bangiga Adduunka iyo wasaaradda macdanta Itoobiya saameyn weyn ugu yeeshaan. Waxaan filayaa in laga dheregsan yahay dadaalka dheeraadka ah ee uu Shiinaha isna dhankiisa ka wado, illaa heer uu jidad, dhismayaal iyo tareenno maalgelin badan ku siiyey Itoobiya, beddelkeeduna yahay qandaraaska shidaalka degaanka Soomaalida.
Waxaa inoo muuqato in tartankii wadamada shisheeyaha iyo bililiqadii kheyraadka Soomaalida uu hadda halistii ugu weyneyd ay soo foodsaartey, gaar ahaan shidaalka Ogaden Basin. Muddo 45 sano gaareysa (1950-1995), degaanka Soomaali Galbeed waxaa laga qoday 43 ceel oo shidaal ah, laakiin muddadaa kala badhkeed (1995-2018) ayaa waxaa laga qoday in kasii badan oo aanan heynin tirada dhabta ah. Waxaa ii suurtowday in aan helo iskuduwaha dhigaha iyo loolka (latitude and longitude coordinates) 31 ka mid ah 43 ceel ee la qodey intii u dhexeysay 1950 ilaa 1995 (Muuqaal.1 & Muuqaal.2)
Sida ka muuqato khariidada, ceelasha shidaalka ee dhibcaha guduudan ku caalaamdeysan/matalayaan ay degaanno badan ayey ku firidhsan yihiin. Shirkadaha ceelashaas qoday waxay kala ahaayeen Sinclair Oil Corporation oo qoday 17 ceel, Tenneco Oil Exploration oo qoday 8 ceel; Soviet Petroleum Exploration Expedition (SPEE) oo qoday 16 ceel; waxaa kale oo soo raacey Hunt Oil Company iyo Gewerkschaft Elwerath oo midkiiba hal ceel qoday. Shirkadaha maraykanka ayaa 26 ka mid ah 43da ceel qodey, meesha Soofiyeetka uu 16 ceel ka qoday; halka soo hadheyna waxaa qoday shirkad Jarmal ah (Muuqaal.3).
Ka dib markaan sii weyneyay si aan u soo dhoweeyo aragtida xeryaha ku yaalla ceelasha ee shirkadaha iyo ciidamada illaaliyo deggen yihiin, waxaa sawirka ka muuqanayo ceelashii agagaarka Jeexdin ka qodnaa laftoodii/naftirkoodii (Muuqaal.5).
Ka dib waxaa yimaado shirkadahii oo dhulkii oo dhan baa dhirta cagafcagaf ku majiiriyaan (Muuqaal.14) iyaga oo weligeed la darsin (environmental impact assessment) khatarta ay ku leedahay nolosha – illeen dad markii horeba loo leynayey si bilaash ah dan lagama lahee!
Qoraalkani waxa uu ku soo baxay Barkinka.com
Previous Hadhkii Xoriyadda
Next Afkeenna: wadaraynta